ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက် မှအရည်အသွေးမြင့် မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. အတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက် ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ Excellent ကအရည်အသွေး, အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု, အလုပ်အကိုင်, ကြည်ဖြူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များရာမှရရှိခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သော feedbacks ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးအတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာအပြုသဘောဆင်းတုများရောနှောနေခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူတို့သည်ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း clients များ၏လူအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ကတိတော်များရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ client များပေးသင်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအသီးအပွမျှဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable မှအသံအနေအထားတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ပိုကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်လာသောလက်တွဲဖော်စေနိုင်ပုံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကြိုဆိုပါတယ်။ 100% အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးမှုများဖောက်သည်အဆုံးလက်ကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါကုန်စည်အရည်အသွေးမြင့်မားစံနှုန်းဖြစ်ကြ၏သေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။
ပုံစံ - OPT-MW400
ဂျာမနီမှတင်သွင်းသောသတ္တုလိုင်ပေါက်ကိုလက်ခံပါ,corrosion ခံနိုင်ရည်,မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ.လိုင်သက်တမ်းမှာ ၈ ဖြစ်သည်-10 နှစ်,xenon ဆီမီးခွက်သက်တမ်းသည်အဆ ၈ သန်းကျော်ရှိသည်.
မျက်နှာပြင် ၇ လက်မ LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်,အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ကူးပြောင်းခြင်းကိုနားလည်နိုင်သည်,နိုင်ငံတကာဈေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်,CCD monitoring system ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်.
စားသုံးနိုင်သော:XENON မီးခွက်/FILTER ELEMENT
အအေးစနစ်:၁.ရေ 5P မှ 3P အထိအအေးခံခြင်း
ပါဝါလိုအပ်သည်:220V ပါ±10%၅၀/60Hz 380V±10%၅၀/60Hz ဖြစ်သည်
※အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်.,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ※
ကျယ်ပြန့် die အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်-မှိုပုံသွင်းခြင်း,ပလပ်စတစ်မှို,လူမီနီယံ beryllium ကြေးနီမှို,အသေးစားနှင့်အလတ်စား-မှိုအရွယ်အစား,အပိုမှိုကြီးများ,သဲတွင်း,ဒါကိုတော့,ထောင့် chipping နှင့်အနားယူဝတ်ဆင်,sealing အနားများနှင့်အခြားအသေးစားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်သည်.အဆိုပါသက်ဆိုင်အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများပါဝင်သည်:die steel အမျိုးမျိုး,အစွန်းခံသံမဏိ,beryllium ကြေးနီ,အဖိုးတန်သတ္တု,အလွန်ခက်ခဲပစ္စည်း,ကွင်းဆက်,လက်ဝတ်ရတနာ,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ,sensors များ,တိကျစက်ပစ္စည်းများ,ဆက်သွယ်ရေး,connectors များ,data လိုင်းများ,လက်မှုပညာများ,စသည်တို့.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/mold-laser-welding-machine.html
အကောင်းဆုံး မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် မှိုလေဆာဂဟေဆော်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ
ရွှေလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ထူးခြားချက်: လေဆာကွက်သည်သေးငယ်သည်,အလုပ်ထိရောက်မှုပိုမိုမြင့်မားသည်,နှင့်အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားသည်. ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းသည် ၂ ဖြစ်သည်-တူညီသောပါဝါ CO2 လေဆာဖြတ်တောက်စက် ၃ ကြိမ်. ကမ္ဘာကြီးကိုသုံးနေတယ်’ထိပ်တန်းတင်သွင်းသည့်ဖိုင်ဘာလေဆာ,တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်,အဓိကအစိတ်အပိုင်း ၁၀၀ အထိရောက်နိုင်သည်,နာရီ ၀၀၀. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာစွမ်းအင်:2000W ပါ သွေးခုန်နှုန်း:၆၀၀x၆၀၀ မီလီမီတာ အများဆုံးပြေးနှုန်း:၈၀ မီတာ/မိ လေဆာလှိုင်းအလျား:1064nm အလုပ်လုပ်ဗို့အား:380V ဖြစ်သည်/50Hz ဖြစ်သည် အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်.,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. လျှောက်လွှာများ:ဤလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်ရွှေကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်,လက်ဝတ်ရတနာ,ကြေးဝါ,stainless steel နှင့်အခြားပစ္စည်းများ.ရွှေလေဆာဖြတ်စက်၏စျေးနှုန်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်းချက် 3-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်